I-SP-G10 180ml yerabha yeenkuni iglasi ye-Ultrasonic Aromatherapy ebalulekileyo yeoyile, China SP-G10 180ml ngerabha iinkuni iglasi Ultrasonic Aromatherapy kubalulekile oyile diffuser abavelisi, abaxhasi, mveliso - Sunpai Industries Limited
I-SP-G10 180ml ngerabha yeenkuni iglasi ye-Ultrasonic Aromatherapy ebalulekileyo kwi-oli Diffuser
Indawo yokuqala: Ningbo
Inani Model: I-SP-G10
Supply Ukubanako: Iziqephu ze-50000 ngenyanga
I-180ml ye-Bamboo Glass ye-Ultrasonic Aromatherapy Diffuser
I-1.Real Bamboo Finish kunye ne-Sleek Design: Ngokukhangeleka kwendalo kunye nokukhangeleka kwendalo, le diffuser yenziwa ngemithi yoqalo ekumgangatho ophezulu kwaye igutyungelwe ngengubo encinci ye-lacquer.
2.Isandla esenziwe ngeglasi yokuGquma iglasi: Ingaphandle lenziwe ngeglasi ekhethekileyo neyodwa. Xa kufikwa kumba wokusasazeka kweoyile yeprimiyamu, senza inqaku lokungasebenzisi nto ngaphandle kwenqanaba elifanayo le-ultra-high, izinto ezikhuselekileyo, kunye ne-eco-friendly, kunye neenkqubo zikarhulumente zokuvelisa kunye nolawulo lomgangatho olungqongqo.
Ukukhanya kobusuku obuzolileyo obu-3. Yibeke kwigumbi lakho okanye lomntwana wakho kwaye uyisebenzise njengokukhanya ebusuku ukuze ulale ngokwaneleyo.
5. Ukukhuseleka okuKhuselekileyo okuNgenamanzi okuKhuselekileyo: Iya kucima ngokuzenzekelayo xa ifunyenwe kukho amanzi amancinci. Ungakhathazeki malunga nokwenza nayiphi na ingozi kuwe okanye kumatshini ngokwawo.
imathiriyeli Iglasi + bamboo + PP
ukukhanya Ukuzifudumeza okuMthubi okuqaqambileyo / okuMdaka / okuphefumlayo
Ubungakanani beyunithi Φ127 * 138mm
I-SP-G76 120ml Aromatherapy ebalulekileyo yeoyile eyenziwe ngesandla yeCeramic Diffuser